Xeer ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada oo shaaciyey in caddeyn lagu waayey Fahad Yaasiin & Yaasiin Farey - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Baaritaanka Kiiskii Ikraan Tahliil oo dib loogu celiyey Alshabaab iyo Xeer ilaaliyaha Maxkamadda ciidamada oo shaaciy.ey in wax caddeyn ah lagu waayey Fahad Yasiin, Yaasiin Farey iyo C/llaahi Kulane.
Xeer ilaaliyaha Maxkamadda ciidamada qalabka sida Gen. Cabdilaahi Buule Kameey ayaa shaaciyey in baaritaankii Kiiska Ikraan Tahliil Faarax ay natiijo hordhac ah ja gaareen, iyadoo wax caddeyn ah lagu waayey madaxda NISA ee lagu tuhunsanaa, sida uu yiri.
Xeer ilaaliyaha oo TV-ga Dowladda ka hadlay ayaa sheegay inay caddeymo ka qoreen madaxda Hay’adda NISA sida Taliyihii hore Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Ku-simaha Taliyaha NISA Gaashaanle Sare Yaasiin Cabdilaahi Farey iyo Cabdilaahi Kulane, ayna ku waayeen wax caddeyn ah.
Gen. C/llaahi Kameey waxaa u caddeeyay in haya’adda NISA ay la shaqeysay guddiga baarista, iyaddo ka caawisay dhinac kasta oo baarista ah. Sidoo kalenna xubnaha la baaray waxaa ka mida C/qani Maxamed Cusmaan (Wadna-Qabad) iyo Asma Yuusuf Cumar oo ahaa saraakiisha hoose ee NISA oo csbasho laga soo gudbiyey.
Baarista Kiiska Ikraan Tahliiil waxaa kasoo baxay:
1-in NiSA si hufan ula shaqeysay guddiga baarayey kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
2- Inta barista lagu guddi jiray guddi uma aanu soo bixin cadeyn muujineysa in sarkaalad ku maqan tahay gacanta saraakiisha Hay’adda NISA.
3- Guddiga wuxuu hayaa Gal Baariseedka NISA ee Sseegaya in Ikraan ay dileen Alshabaab. Wuxuuna ugu baaqay in cid kastaa oo warbixin ka heysaa Maqanad Ikraan Tahliil ay la xariiraan Hay’adaha dambi barista.
Previous articleXOG: Hoos u dhac ku yimid Ololihii Doorashada Xasan Sheekh iyo Jugta kasoo gaartay Maamul…
Next articleHooyada dhashay Ikraan Tahliil oo si kulul uga hor timid go’aanka Cusub ee Kiiska Gabadheeda